Amandla okuphulukisa wamafutha abalulekile - Afrikhepri Fondation
Lyena okawoyela obalulekile uketshezi oluyiphunga noma izinto ezikhishwe kuzinhlobo ezithile zezitshalo, amakhambi, izihlahlana nezihlahla. Kuya ngesitshalo, kubandakanya ezinye zezimbali zaso, izithelo, amaqabunga, amagxolo ezimpande kanye / noma zingasetshenziswa. “Amandla okuphila” noma umnyombo wesitshalo. Amafutha noma i-resin ithwala izakhi ngesitshalo futhi izivikele kuzo zonke izinhlobo zokucindezela. Kusebenza njengokuvikelwa kwesitshalo ezifweni nakwezinye izifo futhi kuthathwa ngokuthi "kubalulekile" ngoba ngaphandle kwawo, lesi sitshalo besingaphili.
Ukuvama kokudlidliza namandla ecashile wemvelo kawoyela obalulekile
Kukhona i-bio-energy engaqondakali egeleza kuyo yonke impilo ephilayo, ngezinye izikhathi ebizwa ngoChi noma amandla okuphila. Le nandla iboniswa ngemvamisa yokugudluza kagesi.
Iyini imvamisa yokudlidliza?
Konke kuyanyakazisa… I-athomu ngalinye endaweni yonke linokunyakaza okuqondile kokunyakaza noma ngezikhathi ezithile. Ukuhamba ngakunye ngakunye kunemvamisa (inani le-oscillations ngomzuzwana) elingalinganiswa ku hertz. Ingxenye ngayinye yetafula yesikhashana inevolumu ethile yokudlidliza.
Izitshalo eziningi (nezilwane) zisebenzisa ama-enzyme ukuze ziphule izingxenye zemizimba ngesikhathi sokuphila kwazo. Futhi ngayinye yalezi zinkimbinkimbi zinefomu elilodwa lokukristallini elinemvamisa ethile yokudlidliza.
Isibonelo, nansi amafrikhthi avamile kwamanye amafutha abalulekile wekhwalithi yokwelapha eyalinganiswa:
I-Lavender (Lavandula angustifolia) ...... .. 118 MHz
I-Myrr (i-Commiphora Myrrha) ................ I-105 MHz
I-Chamomile Blue (iMatricaria recutita) ... .. 105 MHz
I-Juniper (Juniperus osteosperma) ............ I-98 MHz
I-Aloes / sandalwood (i-albal Santalum) ...... 96 MHz
I-Peppermint (Mentha peperita) ............ .. 78 MHz
I-Galbanum (Ferula gummosa) ............... .. 56 MHz
I-basil (i-Ocimum basilicum) ...................... I-52 MHz
Ukuvama okulinganiselwe kwamafutha abalulekile kuqala ku-52 MHz, imvamisa kawoyela we-basil, bese kukhuphukela ku-320 MHz - imvamisa ka-rose uwoyela. Ukuze uqhathanise, imikhiqizo emisha inemvamisa efinyelela ku-15 MHz, amakhambi omile kusuka ku-12 kuye ku-22 MHz, namakhambi amasha kusuka ku-20 kuye ku-27 MHz. Kucutshungulwe futhi Ukudla okusemathinini ayikho imvamisa elinganiswayo
UDkt. Robert O. Becker, encwadini yakhe Umzimba kagesi, lisitshela ukuthi umzimba womuntu unemvamisa kagesi, nokuthi futhi okuningi mayelana nempilo yomuntu kunganqunywa ngamazinga ayo okuvama.
Phezu kwezifundo zakhe ezitshalweni, uTainio usungule indlela yokusebenzisa umshini wakhe ukukala imvamisa yokudlidliza kukagesi womuntu ngokuthatha ukufundwa ngamaphuzu ahlukahlukene omzimba futhi kufinyelelwe lezi zibalo ndawonye. Izilinganiso zakhe zikhombisa lokho imvamisa yasemini yomzimba womuntu onempilo iyaveveka ku-62 kuya ku-68 MHz.
Ngokusho kukaDkt. Rife zonke izingqamuzana, izicubu kanye nendikimba ine-resonance yayo yokududuza. Ukusebenza ne-generator yayo, ithole ukuthi ama frequencies angabhubhisa iseli somdlavuza noma igciwane. Ucwaningo lwakhe lubonise lokho imvamisa ethile ingavikela ukukhula kwesifo, kanti abanye bebengaqeda lesi sifo.
UBjorn Nordenstrom, isazi semisebe saseStockholm, eSweden, sathola eminyakeni yokuqala yo-1980 ukuthi, ngokubeka i-elektroli ngaphakathi kwesimila nokusebenzisa i-milliamp yesandla ngqo nge-elektrode, kungaqeda isimila esinomdlavuza futhi siyeke ukukhula kwaso. Uthole nokuthi umzimba womuntu unamasimu we-electropositive and electronegative energy.
Ucwaningo olwenziwe ngo-1992 yiTainio Technology, njengengxenye ezimele ye-Eastern State University eCheny, eWashington, luqinisa iziphetho zalaba bacwaningi bokuqala. UTainio nozakwabo banqume ukuthi lapho imvamisa yomuntu ingaphansi kwebanga elihle empilweni enhle, isimiso somzimba sokuzivikela sisonakele. Ukuthola okusekelwe kulolu cwaningo kubonisa ukuthi:
Amangqamuzana omuntu angase aqale ukushintsha (mutate) lapho imvamisa yabo yehla ngaphansi kwe-62MHz.
I-58 MHz yimizimba yomzimba wakho uma unomkhuhlane noma umkhuhlane.
Uma i-candida ikhona emzimbeni wakho, udlidliza kumvamisa we-55MHz.
I-52 MHz imvamisa yomzimba onaleli gciwane le-Epstein-Barr.
I-42 MHz imvamisa yomzimba lapho umdlavuza ungavela khona.
Lapho inqubo yokufa iqala - imvamisa yalinganiswa ku-20 MHz.
Ngokusekelwe ekufundeni kwakhe, umcwaningi uNicola Tesla uthi uma singakwazi ukuqeda amazinga athile angaphandle aphazamisa emzimbeni wethu, siyoba nokuphikisana okukhulu nezifo.
Ngisho nemicabango nemizwa inekhwalithi yokudlidliza eyenza imvamisa elinganiswayo. Isimo somqondo esingesihle sinciphise imvamisa yomuntu nge-10-12 MHz.
Ngokufanayo, into noma into enethonya - efana nemicabango, imizwa namadivayisi emvamisa - ezindaweni zethu zangaphakathi nangaphandle nazo zingasetshenziswa ukwandisa ama-frequencies ethu. Ngokwesibonelo, isimo sengqondo,umthandazo noma ukuzindla okuhle kungakhipha i-10-15 MHz.
Into enefrikhwensi ephezulu ingakhulisa imvamisa ephansi ngenxa yomgomo wokungenela - ukuthambekela kwemizimba emibili yokuhlubuka yokukhiya esigabeni ukuze inyakaze ngokuvumelana. Lo mgomo ubalulekile ekuqondeni amafutha abalulekile angaba nemiphumela kubuningi bethu be-elekthronikhi.
Kodwa-ke, izinhlobo ezahlukene zamaza omgwaqo zingaba nomphumela wesiphithiphithi noma ovumelanayo ezinhlelweni zethu. Lapho okuthile kunyikinyeka kumafrikhwensi amaningi amabi, kukhiqiza “amaza aphikisayo noma angavumelani.” (UDavid Stewart, I-chemistry yamafutha abalulekile kuzo zonke izinto ezilula).
Isibonelo, wonke amadivaysi kagesi asezikhanyeni zasekhaya, ithelevishini, umsakazo, ucingo, i-microwave - ukukhipha amafrikhthrikhi asebenzisa amandla kagesi angabonakali futhi aphikisayo. Umphumela wabo ukuphula insimu kagesi yesintu.
Ngokuphambene nalokho, i-generator ye-frequency Dr Rife kanye nezinto eziningi zemvelo - kuhlanganise namafutha abalulekile - abe nama frequency ahambisanayo ahambisana ngokuvumelana nensimu kagesi yomzimba womuntu.
Umzimba womuntu oduduza ububanzi bawo obuvamile phakathi kwe-62 ne-68 MHz kubhekwa njengathi isimo sempilo.
UDkt. Richard Gerber MD, umbhali we imithi yokudlidliza, isitshela ukuthi enye yezindlela ezinhle kakhulu esingaguqula ngayo amaphethini angasebenzi kahle emizimbeni yethu yamandla ukuphatha imithamo yokwelapha ye "Amandla amabi athile acashile ngendlela izidakamizwa ze-vibration."
Futhi umcwaningi uJim Oschman, Ph.D., obhale imithi yamandla, kubhekiselwa ezintweni zemvelo ezivela embusweni wezitshalo azibiza ngokuthi "yi-pharmacology enamandla" (ngokungafani ne-chemacology yamakhemikhali). Amafutha abalulekile wekhwalithi yokwelapha akhiqiza imvamisa engaguquki evunyelwe ngokwemvelo impilo yomzimba wethu. Amakhemisi kanye namafutha okwenziwa akwenzi.
Inhloso yale nqubo yokuphulukisa ukuhlinzeka imvamisa elungile ebuyisela umzimba esimweni sokuvumelana, esimweni sokulingana.
Ngokusebenzisa uwoyela obalulekile kumvamisa ethile yomzimba womuntu - ngomgomo wokuqeqeshwa - imvamisa ephakeme yamafutha izokhulisa ikhwalithi yokudlikiza yalomuntu. Lapho uwoyela eziningana zihlanganiswa ndawonye, ​​ngayinye inefrikhwensi ehlukile ye-MHz, imvamisa engaphuma ephezulu noma ephansi kunezingxenye ezahlukahlukene.
Futhi ngoba i-oyile ngayinye inemvamisa ethile, futhi izitho zethu nezinhlelo zomzimba kanye nezakhi zomzimba ezidingekayo ukuze kulondolozwe impilo efanelekile ngayinye inamafrikhwensi ayo athize, amandla kagesi kawoyela kulezi zingxenye zomzimba wethu azothuthuka futhi sisekele lezi zitho zomzimba nezinhlelo zomzimba, futhi kuzosiza ekwandisweni kwezakhi zomzimba.
Amafutha abalulekile kumabanga aphezulu wemvamisa athinta ukuthonya imizwelo. Amafutha abalulekile kumajubane aphansi kakhulu anomthelela omkhulu ekuguqukeni kwesakhiwo nasemzimbeni, kufaka phakathi amaseli, ama-hormone, namathambo, kanye namagciwane, amagciwane kanye nesikhunta.
Amakhemikhali asemqoka awahambisani nama-toxins emzimbeni wethu. Lokhu kungahambisani nalokho okusiza ukuqeda ubuthi obuvela ezikhathini zethu. Futhi azenzi ngemizwa engemihle. Ngakho-ke, zingasiza ukwehlisa umoya usizi olukhohliwe ngumphezulu wayo lapho singakwazi khona ukubhekana nakho futhi sikuyeke.
Ukucwaninga kwemitholampilo kukhombisa ukuthi uwoyela obalulekile unemvamisa ephezulu kakhulu yanoma iyiphi into engokwemvelo eyaziwa ngumuntu, enza indawo lapho isifo, amagciwane, amagciwane, isikhunta, njll., Kungahlali khona. Ngikholwa ukuthi ikhemikhali nokuvama kwamafutha abalulekile kunamandla okusiza indoda ukuthi ihlale imvamisa kakhulu lapho isifo singekho.
Amafutha Omzimba Osemqoka Owama-Gary Young Living
Amafutha abalulekile asinikeza indlela engokwemvelo yokubuyisela impilo yemvamisa yemizwa yethu. Ubuhle be-holism yabo ivumela ukusebenza okulula kwezimpilo zethu zansuku zonke. Ubuqili babo, ubukhona obuhlala njalo buhamba ngokuthula ngamasimu kagesi okusiza umzimba wethu futhi abuyisele impilo nenhlalakahle ye-harmoniki kuwo wonke amazinga.
Imiphumela yokuphulukisa yamafutha abalulekile ingaba yinkimbinkimbi futhi ejulile. Zingathinta ukuphulukiswa kuzo zonke izimo ezine zeqiniso - ngokomzimba, engqondweni, ngokomzwelo nangokomoya. Nokho, amafutha ngokwawo awawona ama-agent okuphulukisa. Esikhundleni salokho, zingama-biospiritual agents ezikhuthaza isenzo samasistimu wokupholisa umzimba.
Amasistimu wokuphulukisa womzimba afaka okungaphezu nje kwamasosha omzimba. Yize kubalulekile, amasosha omzimba ayisici esisodwa kuphela sohlelo lokupholisa umzimba okuhlanganisa nomzimba ocashile, uhlelo lwe-psyche kanye nozinzwa, izindlala ze-endocrine, nezinye. Masisebenzisane sonke ukuphulukisa futhi silondoloze impilo.
Encwadini yakhe, Ukunakekelwa Kwezempilo Kwemvelo Kwemvelo namafutha abalulekile, UDaniel Pénoël, MD ubhekisele ku "monadisi onamakha" we udaba, amandla nolwazi efakwe emafutheni.
UDkt. Pénoël ubheka izindawo eziyisishiyagalombili lapho imiphumela yokuphulukisa kwamafutha abalulekile ingaba nethonya.
Umbuso wokuzalwa - Kubhekiswa kwimibuzo yenzalo noma ukulandela izinkinga ngesikhathi sokukhulelwa. Okufanele uPénoël afaneleke “njengomphunga omnandi” ugxile lapha ukunciphisa imiphumela yokuphindaphinda kwe-DNA elimele noma izehlakalo ezenzeka ngesikhathi sokukhulelwa noma ukukhula kwesibeletho.
Umbuso wezinto eziphilayo - kubhekisela ezinkambeni zomzimba ezihlanganisa umzimba, kubandakanya isibindi, izinso, amaphaphu, ipeni, isimiso senhliziyo, uhlelo lokugaya, njll. ama-molecule anamakha anikezela ngezakhiwo ezisiza ukwenza ngcono ukusebenza kwezitho zomzimba.
Isizinda se-bioelectronic - kubhekisa into ye-biochemical kanye nezinhlelo ze-electromagnetic of the organism. Amafutha abalulekile anawo ikhono elimangazayo lokulinganisa i-pH, ukukhuphula ukumelana kukagesi, kanye nokunciphisa ukuphuma kwe-oxidation emzimbeni wezinto. Ukwengezwa kulesi senzo se-biochemical isenzo sabo se-electromagnetic - esingenza isimo esingenakuvikela izifo eziphilayo.
Umbuso we-microbial - Lezi yizimbali kanye nezilwane ezikhona emzimbeni wethu, kufaka phakathi amagciwane, kanye nomfelandawonye onobungane.Endleleni yokugaya yedwa, sinebhaktheriya amaningi kunama-cell emzimbeni wethu . Amanye amafutha abalulekile anekhono loku ukuqeda izakhamuzi ezingafuneki ngenkathi ilondoloza lezo eziwusizo.
Umbuso wokugonywa - Kusho imisebenzi yomzimba yokuzivikela. Imiphumela yokwelashwa kawoyela ebalulekile iyaziwa ukugqugquzela, ukulawula noma ukulungisa indlela yokusabela ngayo amasosha omzimba.
Umbuso wokwakha - kubhekisela emathanjeni, amalunga, kanye nemisipha yomzimba, ikakhulukazi umgogodla. I-Aromatherapy ingadlala indima esekelayo ukulungisa, amasu wamandla, noma isakhiwo esibaluleke kakhulu.
Umbuso we-glandular - kubhekisa ohlelweni lwezindlala emzimbeni olukhiqiza iqembu elikhulu futhi elihlobene kakhulu nama-hormone ukulawula imisebenzi eminingi yomzimba nezinqubo eziningi zengqondo. Njengama-molecule abalulekile wamafutha, la mahomoni ayinkimbinkimbi kakhulu futhi anomthelela omkhulu ekukhuleni, ekwelapheni, ezempilo, nasekulawulweni kwezinhlelo zomzimba. Kuphakathi kwesenzo esiqondile noma izinqubo ezicashile kakhulu ze-biochemical (ama-molecule angamabumbeko wezakhiwo zama-hormone), Amafutha abalulekile angasetshenziswa lapha futhi ukugqugquzela, ukulinganisela, noma ukulawula ukusebenza okwenziwe kahle.
Umbuso we-neuro-psychic - Kusho imisebenzi ehlobene ngqo futhi ilawulwa ubuchopho - ". ikhompyutha esembusweni wabantu ”noma Lokhu kufaka impendulo yokusabela ebuhlungwini, ukulawula kohlelo lwezinzwa olunezwela nolunobuhlakani, ukukhiqizwa kwama-endorphin, imisebenzi yokungazi nememori, kanye ne-libido, phakathi kwabanye. Imiphumela yamafutha abalulekile ingavuselela, ilinganise, noma ilawule le misebenzi ngayo le ndawo enikeza inani lokuphendula okuphezulu kakhulu kwamamolekyulu amnandi.
Ibhayibheli lami lamafutha abalulekile: I-New augmented edition ivuselelwe ngokugcwele
24,90€ kukhona kusitoki
8 okusha kusuka ku-24,90 €
I-6 isetshenzisiwe kusuka ku-27,65 €
Thenga i-24,90 €
kusukela ngoSepthemba 23, 2020 2:23
umhlahlandlela | ibhayibheli | i-aromatherapy | 9791028510046 | I-Danièle Fitness | amafutha abalulekile
Impilo ecebile neningi ngokomoya - UJoseph Murphy (Audio)